» कास्की उपचुनाव : नेकपाकी विद्या भट्टराई विजयी, संसदमा विद्याको प्रवेश : परिस्थितिले उम्मेदवार, जनमतले परीक्षा !
कास्की उपचुनाव : नेकपाकी विद्या भट्टराई विजयी, संसदमा विद्याको प्रवेश : परिस्थितिले उम्मेदवार, जनमतले परीक्षा !
१५ मंसिर २०७६, आईतवार २०:०१
कास्की – कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपाकी उम्मेदवार विद्या भट्टराई (अधिकारी) विजयी हुनुभएको छ ।
भट्टराईले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खेमराज पौडेललाई ८ हजार ४ सय ३ मतले पराजित गर्नुभएको हो । भट्टराईले २४ हजार ३ सय ९४ मत प्राप्त गर्दा पौडेलले १५ हजार ९ सय ९१ मत प्राप्त गर्नुभएको हो ।
भट्टराई विजयी भए लगत्तै कांग्रेस उम्मेदवार पौडेलले मतदातालाई धन्यवाद दिनुका साथै भट्टराईलाई खादा ओढाएर बधाइ तथा आगामी कार्यकालको शुभकामना समेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै समाजवादी पार्टीका धर्मराज गुरुङले १ हजार ९ सय २२ मत प्राप्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रोमबहादुर भण्डारीले १ हजार १ सय ५३, साझा पार्टीकी रजनी केसीले ९ सय ४२ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
कास्कीमा ६ सय मत बदर भएको छ । १६ जना उम्मेद्वारले बदर मतभन्दा पनि कम मत पाएका छन् ।
कास्की २ मा ६३ दशमलव ० प्रतिशत अर्थात ४५ हजार ५ सय ६३ मत खसेको थियो । कुल ७१ हजार ८ सय ७१ मतदाता रहेको कास्कीमा २० हजार ७ सय ८४ पुरुष र २४ हजार ७ सय ७९ महिलाले मतदान गरेका थिए ।
इतिहासले देखाउँछ, नेता र नेतृत्व दुई प्रकारले जन्मिन्छन्, एउटा प्रक्रिया वा राजनीतिक आन्दोलनबाट र दोस्रो घटना वा परिस्थितिबाट । विद्या भट्टराई अहिले दोस्रो तरिकाबाट नेता भइन् ।
समाजशास्त्र पढेकी र राजनीतिलाई छामेकी विद्या चुनावअघि यही भन्थिन्, ‘म घटना र परिस्थितिले राजनीतिमा होमिएँ । म नेतृत्व स्थापित गर्ने अभियानमा छु ।’
विद्या विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा देखिइन् । महिला आन्दोलन हुँदै प्राज्ञिक क्षेत्रतिर लागिन् र पार्टीगत राजनीतिबाट ओझेल परिन् । एउटा त्यस्तो दुखद् घटना घट्यो, जसले विद्यालाई राजनीतिमा युटर्न नै गराइदियो ।
२०७५ फागुन १५, विद्याका निम्तिमात्रै होइन, देशकै निम्ति दुखद् घटना थियो । ताप्लेजुङको पाथिभारा पुगेर फकिँदै गर्दा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी ज्यान गयो । जुन घटनामा विद्याले श्रीमान गुमाइन्, देशले एक आशा गरिएका युवा मन्त्री तथा नेता गुमायो ।
त्यही वियोगान्त घटना, जसले शोकलाई शक्तिमा बदल्दै विद्यालाई राजनीतिमा पुनरागमन हुन बाध्य पार्‍यो । ०७६ मंसिर १४, उपनिर्वाचनको मिति तय भयो । रवीन्द्रको निधनपछि कास्कीमा हुने उपनिर्वाचनमा सुरुदेखि नै विद्याको चर्चा चलिरह्यो । चर्चाका बीच पनि विद्याले भन्थिन्, ‘म अहिले नै राजनीतिबारे सोच्न सकेकी छैन । आफैं दाबी गर्ने त कुरै भएन, पार्टीले निर्णय गरे, त्यो पछिको कुरा भयो ।’
कास्की २ को उपनिर्वाचनमा विद्याको विकल्पमा नेकपा नेता वामदेव गौतमदेखि अहिले प्रदेश १ को प्रमुख नियुक्त भएका सोमनाथ प्यासी, रवीन्द्रका सहपाठी धनराज आचार्य, भीम कार्कीसम्म आकांक्षी थिए । तर, विद्याले चाहेको हकमा उनी नै पहिलो विकल्प थिइन् ।
अन्ततः नेकपाले विद्याको विकल्प देखेन, विद्या नै उपयुक्त पात्र रहेको ठम्याइ गर्दै कास्की–२ को उम्मेदवार बनाएर मैदानमा ओराल्ने निर्णय गर्‍यो ।
०५७ सालमा राजनीतिबाट प्राज्ञिक क्षेत्रमा लागेकी थिइन्, विद्या । २० वर्षपछि पार्टीको निर्णयलाई सम्मान गर्दै उनी सांसद बन्ने होडमा चुनावमा होमिइन् ।
विद्यालाई उम्मेदवार बनाउनुका पछाडि विभिन्न जित्ने आधारहरु नेकपाले देखेको थियो । एक त रवीन्द्रको निधनपछि उनीप्रति जनताको सहानुभूति रहन्थ्यो । अर्को, विद्या राजनीतिक परिवारमा जन्मेकी, विद्यार्थी आन्दोलन र संघर्षबाट उठेकी, वैचारिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा लागेकी व्यक्ति भएका कारण पनि उनी उपयुक्त उम्मेदवार भएको नेकपाको ठम्याइ थियो ।
विद्याको उम्मेदवारीको टुंगो लागेलगत्तै प्रतिस्पर्धीका रुपमा पाका नेता खेमराज पौडेललाई कांग्रेसले टिकट दियो । खेमराज लामो समय कांग्रेसमा निष्ठाको राजनीति गरेर पनि अवसर नपाएका त्यागी नेता थिए । उनको उम्मेदवारीसँगै केन्द्रदेखि जिल्ला र क्षेत्रका वडासम्मै एकताको सन्देश गएको कांग्रेसको दाबी थियो । १६ जना आकांक्षीमध्येबाट खेमराजले टिकट पाएपछि सबै एक भएको उद्घोष गर्दै कांग्रेसले चुनावी अभियान थाल्यो । चुनावी सारगर्मी बढ्दै जाँदा जीत कसको हुन्छ, यसै भन्न सक्ने अवस्था थिएन ।
विद्या वा खेमराज जसले चुनाव जिते पनि झिनो मतान्तरले जित्ने धेरैको अनुमान थियो । नेकपाले भने पहिलेभन्दा ५ हजार मतान्तर बढाउँदै १३ हजार ८ सय ४६ जित्ने दाबी गरेको थियो । कांग्रेसले थोरै मतले भए पनि जित्ने दाबी गरिरहेको थियो ।
अन्तत विद्या ८ हजार ४ सय ३ मतान्तरका साथ कास्की २ बाट निर्वाचित भएकी छन् । विद्याले २४ हजार ३ सय ९४ मत ल्याउँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी खेमराज पौडेलले १५ हजार ९ सय ९१ मत ल्याए ।
झिनो मतान्तर हुने भनिएको थियो । तर, विद्याको गएको निर्वाचनमा भन्दा मतान्तर बढाएकी छन् । गएको निर्वाचनमा रवीन्द्र अधिकारीले ८ हजार ५ सय ४६ मतान्तरले चुनाव जितेका थिए । अधिकारीले २७ हजार २ सय ७ मत ल्याउँदा उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेस उम्मेदवार देवराज चालिसेले १८ हजार ६ सय ६१ मत ल्याएका थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा ७० हजार ६ सय ५१ मतदाता थिए ।
अहिले ७१ हजार ८ सय ७१ मतदाता पुगेका थिए । त्यसमध्ये ४५ हजार ५ सय ६३ अर्थात ६३.४० मात्रै मत खसेको छ । त्यसको ५३.५३ प्रतिशत मत ल्याउँदै विद्या विजयी भइन् । रवीन्द्रले ह्याट्रिक मारेको क्षेत्रमा उनकै पत्नी विद्याको इन्ट्री भएको छ ।
राजनीतिमा स्वच्छ छवि बनाएर काम गर्ने र आफैं प्रतिवद्धता पूरा गर्नैपर्ने चुनौति उनीसामु आएको छ ।रवीन्द्रले देखेको सपना पूरा गर्ने र सधैं जनताप्रति उत्तरदायी रहने बताउँदै चुनावी मैदानमा होमिएकी विद्याको परीक्षा सुरु भएको छ ।
विद्यार्थी आन्दोलनदेखि संघीय सांसदसम्म
विद्याको जन्म नै राजनीतिक परिवारमा भयो । विद्या प्रधानमन्त्रीका केपी शर्मा ओलीका पूर्व पराराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईको बहिनी हुन् । राजन राजनीतिमा सक्रिय हुँदा विद्याको पनि आकर्षण बढ्दै गयो । स्कले जीवनमै विद्या अखिलसँग नजिक थिइन् । अनेरास्वयुले गरेको सरसफाइ आन्दोलन, हाजिरी जवाफ, वक्तित्वकलाजस्ता अतिरिक्त क्रियाकलाप र कार्यक्रममा उनी सहभागी हुन्थिन् ।
२०४२ साल कक्षा ७ मा अध्ययन गर्दादेखि नै अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनसँग नजिक भएर काम गरेको विद्या सुनाउँछिन् । ०४५ सालमा भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो । अनेरास्ववियुले आन्दोलन चर्कायो । त्यसबखत विद्यालाई राष्ट्रियताका विषय अझ छायो । त्यसपछि उनी विद्यालयहरुमा संगठन विस्तार गर्ने अभियानमा सहभागी भइन् ।
एलएलसी पास भएर विद्या पद्मकन्या क्याम्पसमा भर्ना भइन् । पद्मकन्या क्याम्पस विद्याको राजनीतिक उर्वर समय नै बन्यो । उनी त्यहाँ प्रारम्भिक कमिटी हुँदै विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिन थालिन् ।
विद्यार्थी आन्दोलनसँगै २०४७ सालमा अखिल नेपाल महिला संघतिर पनि उनको प्रवेश भयो । अनेरास्ववियु र अनेमा संघ दुबैतिर विद्याको सक्रियता बढ्यो । विद्या त्यहीबेला अनेमा संघ जिल्ला समिति काठमाडौंको कोषाध्यक्ष भइन् ।
०४७ सालमा जन सांस्कृतिक परिवारको सदस्य बनेकी विद्याले त्यसै साल नेकपा एमालेको संगठित सदस्य बनेकी थिइन् । ०४८ सालमा पोखरामा अनेरास्ववियुको एघारौं राष्ट्रिय सम्मेदन थियो । उनी त्यो सम्मेलनमार्फत राष्ट्रिय परिषदमा निर्वाचित भइन् । त्यसको पछिल्लो वर्ष उनले एमालेको वडा सदस्य लिएर पार्टीको राजनीति थालेकी थिइन् ।
२ पटकसम्मपद्मकन्या क्याम्पस स्ववियुसभापति उमेदवार थिइन्, विद्या । तर, जीत हासिल गर्न सकिनन् । ०५० सालमा भने उनी अनेरास्ववियु महिला विभाग प्रमुख बन्न सफल भइन् ।
०५५ मा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सचिवको जिम्मेदवारीमा थिइन्, विद्या । उनी सचिव हुँदा रवीन्द्र अधिकारी अनेरास्ववियुको महासचिव थिए । ०५६ मा अखिल नेपाल महिला संघ केन्द्रीय सदस्य र कार्यालय सचिव, बुद्धिजीवी परिषद सदस्य हुँदै विद्या प्राध्यापक क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी हुन् । ०५८ देखि प्राध्यापन पेशा सुरु गरेकी विद्याले ८ वर्ष सामुदायिक क्याम्पसमा ८ वर्ष प्राध्यापन गरिन् ।
०५९ देखि आंशिक शिक्षकका रुपमा प्राध्यापन पेशा सुरु र अनुसन्धानका कामहरुमा सहभागी भइन् । जनआन्दोलन ०६२÷०६३ पछि नेकपा एमालेको संघीय मामला विभागको सदस्य भएर काम गरकी विद्यासँग उच्च शिक्षा पाठयक्रम निर्माण समितिको सदस्य भएर काम गरेको अनुभव पनि छ ।
०६६ मा प्राध्यापक इलाका कमिटीमा सामुदायिक क्यामपसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उपाध्यक्ष भएकी विद्या सार्क स्तरीय महिला सञ्जालमा वकालत गर्ने सामाजिक संस्था वियोन्ड बेइजिङ कमिटीमा कार्यक्रम संयोजकको रुपमा कार्यरत रहिन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमाको खुल्ला सेवा आयोग परिक्षा पास गरी ०७२ सालदेखि रत्नराज्य क्याम्पसमा स्थायीरुपमा उपप्राध्यापकको जागिरे भइन्, विद्या । तर, स्थायी जागिर थालेको ४ वर्षमै रवीन्द्रको निधनपछिको घटनाक्रमले उनलाई कास्की–२ को उम्मेदवार बनायो । कास्की २ का जनताले जिताएपछि उनै विद्या अब प्रतिनिधि सभामा सांसदको रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने भएकी छन् ।
रवीन्द्रसँगको भेट, विवाह र राजनीतिक पुनरागमन
विद्या र रवीन्द्र दुवै जना विद्यार्थी आन्दोलनमा थिए । विद्या काठमाडौंमा र रवीन्द्र पोखरा । अनेरास्ववियुकै कार्यक्रममा ०५० सालतिर उनीहरुको चिनजान भएको हो । विद्या अहिलेको महिला विभाग प्रमुख हुँदा रवीन्द्र अनेरास्ववियुका कोषाध्यक्ष थिए । उनीहरुले एउटै सचिवालयमा काम गरे ।
अखिलमा सँगै काम गर्दा उनीहरु नजिक हुन थालेपछि सर्कलमा चर्चा र कुरा चल्न थाल्यो । दुबैजना राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्न असहज ठानिन्, विद्याले । ‘दुबै राजनीति गर्दा कहिले दाइसँग जोड्ने, कहिले प्रेमीसँग जोड्ने,’ विद्याले भनेकी थिइन्, ‘महिलाको पनि स्वतन्त्र विचार छ भनेर नलिएको मैले महसुस गरें । म विद्यार्थी आन्दोलनमा नबस्दै राम्रो हुन्छ भनेर म अखिलको सचिव भएको ३ महिनापछि छोडेर अनेम संघ गएँ ।’
यहीबीच रवीन्द्र र विद्याको विवाहको कुरा चल्यो । रवीन्द्रका सहपाठी धनराज आचार्यले मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेले र ०५६ सालमा उनीहरुले विवाह गरे । स्नातकोत्तर गर्दागर्दै विवाह भएपछि विद्याले राजनीतिक बाटो बदलेर प्राध्यापनतिर लागिन् ।
रवीन्द्रलाई राजनीतिकरुपमा अघि बढाउन उनले हर दुःखमा प्रोत्साहन गरिन् । २ छोरा जन्माइन् र हुकाउँदै थिइन् । रवीन्द्रको आकस्मिक निधनले राजनीतिक नेतृत्वको बाटोमा ल्याइ पुर्‍यायो ।
अब पारिवारिक र राजनीतिक दुबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा उनी आइपुगेकी छन् । उनकै भनाइअनुसार तत्काल राजनीतिमा आउने उनको विचारै थिएन । घटना र परिस्थितिले राजनीतिमा पुनरागमनमात्रै गराएन्, जनताको प्रतिनिधि नै बनाएर उपनिर्वाचन संसद पुर्‍यायो ।
सुरु भयो विद्याको परीक्षा
उम्मेदवारको टिकट पाएर चुनावी प्रचारमा होमिँदा पनि विद्यामाथि तिनै कुराहरुले उठे । रवीन्द्रसँग जोडेर आरोप लगाउनेदेखि आँशुको राजनीति गरेको, कायकिरिया पूरा नगरेर संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको जस्ता कुरा उठेका थिए । प्रतिनिधि सभा संसदमा पुगेपछि पनि उनीमाथि यस्ता कुराहरु अवश्य उठ्न छाड्ने छैनन् ।
रवीन्द्रमाथि जोडेर आउने प्रश्नमा विद्याको प्रत्युत्तर हुन्थ्यो, ‘अनुसन्धान गर्ने निकाय पनि छ । दोषी ठहरिए कारबाही गर्ने सरकारको निकाय पनि छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन, त्यसैले म आफैं दोषी छु भने पनि कारबाही भोग्न तयार छु ।’
मतदाताको लाइनमा विद्या भट्टराई
हर दुःख र प्रहारमा सहने शक्ति रवीन्द्रबाटै सिकेको विद्या बताउँछिन् । एनसिएल काण्डदेखि वाइडबडी काण्डसम्म रवीन्द्रको नाम जोडिएर आरोप लगाउँदा आफूले उनीमाथि प्रश्न गरेको र रवीन्द्रको जवाफपछि त्यो आरोपमात्र रहेको उनको भनाइ थियो । अब पनि राजनीतिमा प्रश्नको सामना, आरोपको खण्डन र जनताप्रति उत्तरदायी भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाटोमा उनी आइपुगेकी छन् ।
राजनीतिमा स्वच्छ छवि बनाएर काम गर्ने र आफैं प्रतिवद्धता पूरा गर्नैपर्ने चुनौति उनीसामु आएको छ ।रवीन्द्रले देखेको सपना पूरा गर्ने र सधैं जनताप्रति उत्तरदायी रहने बताउँदै चुनावी मैदानमा होमिएकी विद्याको परीक्षा सुरु भएको छ । यो परीक्षामा विद्याको काम कस्तो हुन्छ, त्यसले नै उनको भविष्यको मार्गचित्र कोर्ने छ ।
जनताले गरेको विश्वास र आस्थामाथि कहिल्यै अपमान नगर्ने विद्याको संघल्प छ । ‘म सधैं जनताप्रति बफादार हुनेछु । जनताको अभिमतलाई सम्मान गर्नेछु,’ विद्या भन्छिन्, ‘पार्टीले गरेको विश्वासलाई न्याय गर्ने छु । सुख दुखमा सँगै हुने छु । जनताले हरबखत साझेदारी र खबरदारी गर्न सक्ने छन् ।’